Aaladda matoorrada ee loo yaqaan 'ABB Motors for sale', abb matoorrada liiska, qaybiyeyaasha abb, matoorrada abb
ABB matoorrada qeybiyeyaasha
Mid ka mid ah matoorrada ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'ABB matoorrada' iyo kuwa ka ganacsada Shiinaha
Ka hel buugga matoorrada abb, waxaan ka iibinnaa matoorrada tamarta hoose ee abb, matoorrada danab sare ee abb, servomotor abb iyo matoorro isku mid ah. Ama nala soo xiriir si aad u hesho liiska qiimaha mootooyinka aabaha, sida ganacsadeyaasha loo yaqaan 'ABB Motors' iyo kuwa loo qaybiyo mootooyinka, waxaan kuu sameyn karnaa xulashada gawaarida aabbaha adiga oo wata warqadda xogta aabbaha. abb wuxuu iibiyaa iibinta, haddii aad rabto inaad hesho alaab-qeybiyaha, aabbe mooto, kaliya nala soo xiriir.
ABB mootada M2BAX taxanaha saddexda waji asynchronous, nooca jiifka iyo toosan 2 4 6 8 pole motor, low voltage General matoorrada guud, ayaa ugu habboon ku habboon codsiyada naqshadeynta caadiga ah ee fudud. Iyada oo tayada fasalka koowaad ee ABB iyo taageero xoogan, shaqooyinka matoorradan waxaa aqoonsan macaamiil aad u tiro badan iyo OEMs. Mashiinka wuxuu gaaraa waxtarka IE2. Cabbirka qaab-dhismeedka laga bilaabo 71-355, 0.18-355KW. M2BAX matoorrada taxanaha ah waa lawareega laga keenaa NSK, saa'idaadaha sumadda SKF, dhammaan matoorada waxaa lagu qalabeeyaa xarriiqooyin xiraya silsiladda dhamaadka D. Fasalka ilaalinta nashqadeynta wax soo saarka IP55, iyadoo la siinayo IP56, IP65 habeyn. Waxay bixisaa daraasiin ah qaabeynta xulashada lambarka korantada si loo daboolo baahiyaha deegaanno kala duwan.
Matoorka ABB M3BP
taxanaha mbb m3bp motor, mootada waxtarka sare, mootada tamarta keydinta, mootada bey'ada u fiican. Waxtarka: Heerarka Waxtarka ee Heerka I yurubiyanka, · Awoodda: 0.25-710KW (in kabadan 710KW waa la soo dhoofsan karaa iyadoo la adeegsanayo M3BP motor), · Voltage: 220-690V, · Waxaa lagu qalabeyn karaa qalab kala duwan sida encoder, · Nidaamka qaboojinta madaxbanaan la heli karo, · Ikhtiyaar caadi ah ama isdabajoog ah, Mowjadaha awoodda Inverter> 100KW, waxay u baahan yihiin in lagu qalabeeyo biraha dahaarka leh ； M3BP71 ； M3BP80
MQAEJ, QAEJ taxanaha saddex-waji asynchronous motor koronto electromagnetic waa badeecad beddelatay noocii hore ee MYUEJ iyo taxanaha YUEJ. Qaab dhismeedkiisu waa isku darka matoorrada taxanaha QA iyo biriiga korantada. Waa aalad wadis oo ku habboon casriyeynta warshadaha. Waxay leedahay faa'iidooyinka kala duwanaanta weyn, qaab-dhismeedka fudud, buuq yar, waqti bareega gaagaaban, waxqabadka brakaysiga lagu kalsoon yahay, iyo cabbirrada isku xirnaanta (marka laga reebo dhererka wadarta). Waxbadan ayaa looga adeegsaday mashiinada alwaaxyada, wadida korantada tigidhada iyo qalabka mashiinada goynta birta, khadadka waxsoosaarka warshadaha fudud, mashiinka dharka, mashiinka kiimikada, warshadaha dhismaha, iwm.
Taxanaha M2JA ABB matoorrada qarxa-caddeynta ee Marine waxaa loogu talagalay danab ballaaran, iyo waxtarka, awoodda korantada iyo xawaaraha mootada waxyar ayey ku kala duwan yihiin xaaladaha korantada ee kala duwan.BT4 jiifsan toosan CT4, 50Hz: 220-240V / 380-420V; 380-420V / 660-690V, △ / 丫. Xiriirinta Loogu talagalay Batroolka, gaaska dabiiciga ah iyo warshadaha kiimikada, gaasas kala duwan oo ololi kara ama uumiga ayaa laga soo saari karaa habka wax soo saarka. Tusaale ahaan, sifeynta waxaa ka mid ah propane, butane, petrol, ethylene iyo acetylene; iyo dhirta bacriminta waxay leeyihiin ammonia, methanol, carbon monoxide iyo gaaska biyaha.
M2QA taxanaha ABB matoorrada korantada waxay la socdaan (3KW iyo kuwa ka hooseeya matoorrada korontada 220-240V / 380-420V, 4KW iyo wixii ka sareeya, Awoodda korantada 380-420V / 660-690V, △ / Y) naqshad danab ballaaran, matoorku wuxuu ku shaqeeyaa danabyo kala duwan, Waxtarka, awoodda korantada, iyo xawaaraha ayaa waxyar iska beddelaya xaaladahaas.
Mashiinka isdabajooga ee QABP ayaa la xakameeyay seddex waji oo isku mid ah asynchronous waa mashiin sameeya isbeddelka soo noqnoqda iyo qawaaniinta xawaaraha iyada oo loo marayo qalabka wax lagu beddelo. Matoorku wuxuu qaataa qaab dhismeedka qafiska oo wuxuu ku qalabeysan yahay taageere qulqulaya qulqulka qaaska ah si loo hubiyo in mootadu leedahay saameyn qaboojin oo wanaagsan xawaare kala duwan. Mashiinka ayaa si gaar ah loogu talagalay loona soo saaray noocyo kala duwan oo sharciyeynta xawaaraha stepless ah, waxaana si weyn loogu isticmaali karaa warshadaha sida warshadaha fudud, dharka, kiimikada, metallurgy, qalabka mashiinka iyo dhirta kale ee koontaroolka xawaaraha. Cabbiraadaha culeyska korontada iyo qeexidda dhererka bartamaha waxay la jaan qaadayaan matoorada taxanaha M2QA Awoodda taxanaha matoorrada ayaa ka yimid 0.25KW-315KW, dhererka dhexe ee saldhiguna wuxuu ka socdaa 71mm-355mm.
QAMT taxanaha matoorrada wejiga sadex geesoodka ah ee mashiinada galaaska. Gawaarida QAMT serials motor waxaa si gaar ah loogu habeeyay qalabka muraayadaha qashinka. Waxay leedahay hawo-celin wanaagsan, iyo walxaha jirku waxaa loo isticmaalaa bir bir culus leh, oo wadata SKF. Kuwaani waxay xaqiijinayaan in mootoku si la isku halleyn karo ugu gudbi karo xaalada adag. Gawaarida QAMT serials waxay ku habboon yihiin mashiinno kala duwan oo lagu farsameeyo dhalooyinka.
Summad: ABB Model: M3AA taxane ah Aluminium guri, 0.55KW-30KW; Asal ahaan: Nooca qaabdhismeedka rakibida Shiinaha: Qaabka kale ee bixinta tamarta: Nooca tamarta korantada AC: Mabda 'shaqeynaya AC: Qaab dhismeedka mootada oo aan caadi ahayn iyo mabda'a shaqeynaya: Isugeynta xawaaraha socodka socodka: Wejiga korantada xawaaraha joogtada ah: Seddex-waji hawlgalka mootada: Isticmaalka kale: Nooca guud ee shaqada: Nooca ilaalinta mootada: Nooca fasalka dahaarka furan: Fasalka F. Heerka ilaalinta naqshadda mootada waa IP55, oo bixisa heer sare oo ilaalin ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Kordhi kalsoonida mootada. Waxtarka sare, M3AA mootada waxaa loo habeeyay waxqabad sare waxayna soosaareysaa keyd tamar badan.
M2JAX taxane-caddayn saddex-waji oo asynchronous ABB matoorro ah waxaa soo saaray ABB Motors Corporation iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyada soosaarka matoorrada cusub iyo mideynta astaamaha heerka Shiinaha ee 3836-2000-4. Waxaa hadda lagu isticmaalaa warshadaha gudaha ee alaabada heerka 1aad ee matoorrada-dabka u eg (Ex d C) alaabooyinka (Heerkulka kooxda T4-TXNUMX). Naqshad isqurxin oo si buuxda u lifaaqan.
Aad dukaanka onlineka ABB
Si aad u hesho soo jeedinta qiimaha dhammaan noocyada matoorada ABB
Ku saabsan ABB Motors iyo farsamo inc
Aaladda matoorrada ee loo yaqaan 'ABB matoorrada' iyo matoorrada farsamada waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo matoorro koronto ah iyadoo la raacayo heerarka IEC ee lagu daboolayo baahiyaha warshadaha kala duwan, oo ay ka mid yihiin matoorrada caadiga ah, matoorrada kaladuwan, matoorrada badda, matoorka-qarxa, matoorrada aan iftiimin, matoorka flue, laba- matoorka xawaaraha, matoorka bir biriiga, iyo rotors ውጫዊ. Mootada, madaxa mooshin. Gawaarida gaarka ah ayaa loo qaabayn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, dhammaantoodna waxay buuxinayaan shuruudaha adag ee macaamiisheenna. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay soo bandhigaysaa matoorro ballaaran oo kala duwan oo leh tilmaamo caymis oo kaladuwan iyo shuruudo kala duwan iyo soo noqnoqoshada. Macaamiisha ugu waa weyn ee shirkadda waa taageerayaal qaboojiyeyaal, mashiinnada dekedaha iyo karooyinka, bambooyinka, wax yareeyeyaasha, qalabka mashiinka, mashiinnada dharka, mashiinnada galaaska, badaha, mashiinnada kaabayaasha tamarta, mashiinnada guddiga wareega iyo mas'uuliyiinta kale ee warshadaha. Caymiska mashruuca: warshadda korantada, jiidaha iyo xaashiyaha, batroolka, biraha, markabka, dekedda, dhismaha, sibidhka, garoonka diyaaradaha, iwm. Waqtigan xaadirka ah, 45% matoorrada ay soo saarto shirkadda waxaa loo dhoofiyaa dibadda iyada oo loo marayo shabakadda iibka caalamiga ah ee ABB, inta badan gudaha Suuqa Yurub.
Ku saabsan buugga matoorrada abb iyo xaashida xogta abb
Waxaan gacanta ku haynaa dhammaan buugaagta mootooyinka aabaha oo nala soo xiriir si aad u hesho xaashida xogta mootada aabbaha ama sawirada mootooyinka ABB ee aad rabto waxaanan kuu soo diri doonaa markii aan helno.
Ku saabsan abb-qaadayaasha iyo kuwa ka ganacsada abb
Waxaan ka mid nahay ganacsade Idman oo ka socda ABB waxaanan kuu soo bandhigi karnaa dhammaan shahaadada si aad noogu taageerto qaybiyaha abb. waana hubaal, dhammaan matoorrada ABB ee naga yimaada inay yihiin kuwo dhab ah oo tayada la hubo.
Ku saabsan ABB matoorka iyo faahfaahinta magacyadooda
Waxaa jira arrimo badan oo lagu ogaanayo saxda ah matoorrada ABB ee noqon doona midka ugu fiican ee dalabka yur. Waxaan sameyn doonaa xulashadan. Waxyaabaha ugu badan ee la soo dhoofiyo ayaa ah inaad na siiso sida ugu macquulsan ee faahfaahinta, tusaale ahaan, ma u isticmaashaa darawalka codsiyada xaddiga joogtada ah? Sidee waxqabadka xakamaynta ugu xawaare yar yahay? iwm. Waxaa jira ku dhowaad dhammaan faahfaahinta macluumaadka ee ku jira magaca abb mootada.
No.5 Wanshoushan Wadada Yantai, Shandong, Shiinaha
Waxaan abuurnaa hal abuur hal abuur leh
Mashiinka ABB wuxuu macaamiisha siiyaa wax soo saar iyo adeegyo ABB hufan oo lagu kalsoonaan karo maamulkiisa wanaagsan iyo tikniyoolajiyad casri ah. Waxtarka tamarta ABB wuxuu kudhowyahay 100%, wuxuu keydinayaa ilaa $ 500,000 intaa kabadan. Mootooyinka ABB waxay ka dhigayaan matoorradeena habeysan imika saamiyada xawaaraha sare la taageeray, sidoo kale matoorrada korantada sare ee guud waxay isku daraysaa tayo sare iyo waxqabad qiime
ABB Motors iyo matoor loo adeegsaday Shipbuilding ee warshadaha badda
Wax soo saarka ABB, xalka iyo adeegyada loogu talagalay Maraakiibta Maraakiibta Maraakiibta oo hubin kara waxqabad aad u fiican iyo kalsooni xitaa dalabyada dalbanaya. Maraakiibtayada Maraakiibta ee waxsoosaarka maraakiibta waxay la kulmi karaan shuruudaha amniga iyo deegaanka ugu sareeya, iyo shabakadeena caalamiga ah waxay hubineysaa inaad si dhaqso leh uga jawaabi karto iyo markasta oo aad u baahato.
ABB waxay siisaa matoorro kala duwan, matoorro iyo gudbinno loogu talagalay codsiyada badda, oo ay ka mid yihiin kicinta iyo matoorrada matoorrada iyo matoorrada, iyo sidoo kale matoorro hooseeya iyo dhexdhexaad ah. Khibradeena warshadeed ee baaxadda leh waxay noo oggolaaneysaa inaan fahamno baahiyaha macaamiisheena iyo inay naga dhigto astaan ​​lagu kalsoon yahay.
ABB Motors iyo matoor loo adeegsaday warshadaha macdanta
Macdanta iyo warshadaha macdanta waxaa ku jira qalabka korantada iyo qalabka farsamada ee miinooyinka iyo dhir ka-jarista dhirta si looga soo saaro iyo looga hawl-galo saliidda.
Warshadaha wax soo saarka macdanta ee caalamiga ah waxaa ka socda is-dhexgal taas oo keentay in shirkado yar yar oo macdan qodista ka badan ay suuqa ka taliyaan. Shirkadahaan macmiisha waaweyni waxay ganacsi ku leeyihiin matoorrada ABB sababta oo ah taageerada ABB ee soosaarka iyo adeegyada kuma koobna miinooyinka. ABB waxay sidoo kale siisaa la-hawlgalayaasha OEM iyo EPC alaabada iyo adeegyada.
Baahida loo qabo waxsoosaarka asaasiga ah ayaa sii kori doona, laakiin tayada wax soo saarka birta ee haray ayaa sii yaraan doona oo ka hooseeya, taas oo u oggolaan doonta shirkadaha macdanta in ay kor u qaadaan oo ay kordhiyaan wax soo saarka si ay ugu sii tartamaan suuqa. Shirkadahaan macdanta waxay ka raadinayaan tikniyoolajiyada hogaaminta ABB inay ka caawiyaan sidii ay u gaari lahaayeen himilooyinkooda ah hagaajinta kalsoonida, yareynta isticmaalka tamarta, iyo kordhinta iswada iyo farsamaynta. Alaabooyinka matoorrada iyo adeegyada ABB ayaa badanaa ka sarreeya filashooyinka macaamiisha waana shuraako ku habboon shirkadaha macdanta adduunka.
ABB Motors iyo dhaliyaasha batroolka, gaaska dabiiciga ah iyo warshadaha kiimikada
Iyada oo loo maro jir ahaan iyo kimikal ahaan loo beddelo karbohaydraytyada, saliida, gaaska iyo warshadaha kiimikada waxay la kulmaan baahida sii kordheysa ee adduunka ee shidaalka, cuntada, hoyga iyo daryeelka caafimaadka. ABB waxay sii wadaysaa inay kordhiso maalgashiga ay ku sameeyso tikniyoolajiyadda si ay uga caawiso saliida, gaaska iyo warshadaha kiimikada badbaadinta tamarta, si amaana u shaqeeyaan una yareeyaan saameynta deegaanka.
Matoorrada ABB waxay bixiyaan adeegyo buuxa oo la isku halleyn karo, matoor wax ku ool ah iyo baddelayaal soo noqnoqonaya dhammaan warshadaha saliidda, gaaska iyo kiimikada. Wax soo saarka ABB waxaa loogu talagalay waaxda warshadaha, teknolojiyadda lahaanshaha lehna waxay xaqiijineysaa in kor loo kaco iyo dayactir yar. Khibradaheena ballaaran ee warshadaha waxay noo oggolaaneysaa inaan fahamno baahiyahaaga waana saaxiibkaaga aad ku kalsoon tahay.
ABB Motors iyo dhaliyaasha cuntada iyo cabitaanka warshadaha
Aaladda matoorrada ee loo yaqaan 'ABB Motors' ee loo adeegsado wershadaha cuntada iyo cabitaanka cabitaanku waxay u baahan yihiin inay la kulmaan shuruudo adag, sida cabitaannada, kuwa isku-darka iyo weellayda loo isticmaalo warshadeynta hilibka, digaagga, kalluunka, caanaha iyo waxyaabaha dubitaanka. Isla mar ahaantaana, qalabka loo adeegsado cunnada iyo warshadaynta cabbitaanka ayaa u baahan dhibaato-la’aan, muddo-dheer, iyo wax-ku-ool aad u sarreeya inta lagu jiro wareegga nolosha.
Matoorrada ABB waxay soo bandhigaan xalal badan oo la xaqiijiyay, hufan oo la isku halleyn karo oo ku saabsan cuntada iyo warshadaha cabitaanka, laga bilaabo walxaha ceyriinka ah, howsha loo wado iyo gaarsiinta xirmooyinka cuntada iyo kaydinta meelaha sida hilibka looga shaqeeyo iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. La kulan shuruudaha warshadaha adag.
Xitaa codsiyada aadka loogu baahan yahay, wax soo saarka iyo adeegyada ABB waxay gacan ka geystaan ​​sidii loo gaari lahaa heerar sare oo tamar tamar leh iyo wax soo saar ah geeddi kasta. Iyada oo la doorbidayo alaabta ceeriin ee la doorbidayo iyo tikniyoolajiyada horumarsan, matoorrada cuntada iyo warshadaha cabitaanka ayaa ka hor imaan kara caqabadaha barnaamij kasta oo ay ku shaqeeyaan si ku-habboon oo joogto ah.